Khasaaraha ka dhashay qaraxa ka dhacay duleedka Muqdisho | Banaadir Times
HomeUncategorisedKhasaaraha ka dhashay qaraxa ka dhacay duleedka Muqdisho
Khasaaraha ka dhashay qaraxa ka dhacay duleedka Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa waxaa ay kasoo baxayaan khasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay inta u dhaxeeya degaannada Xaawa Cabdi & lafoole ee duleedka Magaalada Muqdisho, kaas oo lala eegtay Injineerada turkiga ee dhismaha ka wada wadada xiriirisa Magaalada Muqdisho & degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay ku warameen in Ruux isku soo xiray waxyaabaha qarxa ay Ciidamada toogteen, markii uu ku dhawaaday Goob ay ku sugnaayeen Injineerada Turkiga & Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya, sidaasina uu ku qarxay.
Inta la xaqiijiyay qaraxa ayaa waxaa ku dhintay laba kamid ah Ciidamada dowladda ee Injineerada ilaalinayay halka ay ku dhaawacmeen saddex kamid ah Shaqaalaha Turkiga iyo Afar kamid ah Ciidamada Haramcad.
Dadka ku dhaawacmay qaraxaas ayaa waxaa la keenay Isbitaalka Digfeer ee Magaalada Muqdisho si loogu daweeyo, waxaana Goobta qaraxa uu ka dhacay muddo saacado ah hakad galay isku socodka dadka iyo gaadiidka walow markii dambe dibn loo furay.
Laamaha Amniga dowladda Federaalka Soomaaliya weli wax faah fahin ah kama bixin qaraxaas, iyada oo aysan weli jirin cid sheegatay mas’uuliyada qaraxa lagu weeraray Injineerada dhismaha ka wada wadada xiriirisa Muqdisho & Afgooye.
Previous articleKulamo gooni gooni ah oo ka dhacay Magaalada Garoowe
Next articleMuxuu C/raxmaan C/Shakuur uga baaqday Shirka Garoowe?